ISIS oo qoor goysay wariye u dhashay Japan iyo duuliyihii reer Urdun oo halis ku jira – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
ISIS oo qoor goysay wariye u dhashay Japan iyo duuliyihii reer Urdun oo halis ku jira
A warsame 1 February 2015 1 February 2015
Mareeg.com: Dowladda Islaamiga ah (ISIS) ayaa baahisay muuqaal muujinaya iyagoo qoorta ka jaraya wariye u dhashay dalka Japan, kaasoo lagu magacaabo Kenji Goto oo u afduubnaa tan iyo bishii October ee sandkii hore.
War kasoo baxay dowladda Japan ayaa lagu sheegay in muuqaalka la baahiyey yahay mid argagixiso, lana baarayo saxnimadiisa.
Ra’iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku celiyey in dalkiisu uusan isu dhiibi dooni waxa uu ugu yeeray argagixisada.
Wariye Goto, oo 47 jir ah waxa uu ahaa saxafi caan ah, waxaana bishii October laga afduubtay gudaha dalka Suuriya.
Dowladda Islaamiga ah (ISIS) ayaa horay u dalbatay in dowladda Urdun sii deyso haweeney iyaga ka tirsan oo lagu magacaabo Saajida Alrishawi, taasoo ku xiran dalka Urudun, kuna xukuman dil.
ISIS ayaa sheegtay in haddii lasii daayo haweeneydaas ay sii deyn doonaan wariyaha reer Japan, Kenji Goto hase ahaatee shalay oo sabti ah ayaa dowladda Japan iyo Urdun ku dhawaaqeen in wadahadalku lagu sii deynayey wariyaha iyo duuliyaha reer Urdun Mucaad Al-ksaasibah uu gaaray heer is-mariwaa ah.
Muuqaalka ISIS laguma sheegin xaalka uu ku sugan yahay duuliyaha reer Urdun Mucaad Al-kasaasibah, kaasoo isna ISIS ku hanjabatay iney qoorta ka jari doonto.
Dagaalyahanada dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Suuriya (ISIS) ayaa horay u gowracay muwaadin u dhashay dalk Japan, kaasoo la oran jiray Harman Yukawa.
Duqeymo diyaaradeed oo shalay lala beegsaday goobo ka tirsan Shabeellaha Hoose iyo Baay
RW Cumar: Waxaa hoos u dhac ku yimid howlihii adeegga qaranka